တောင်သူ လယ်သမားများ အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရန်နှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်သည့် ဥပဒေ?? - Yangon Media Group
တောင်သူ လယ်သမားများ အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရန်နှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်သည့် ဥပဒေ??
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇
တောင်သူလယ်သမားများ အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရန်နှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့် တင်ရန်ရည်ရွယ်သည့်ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် တင်သွင်းခဲ့ပြီး ကိုယ်စားလှယ်များ ထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာဆောင်ရွက် ပေးကြရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်က ပြောကြားသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် တောင်သူလယ်သမား အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေးဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအား စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေး မြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနကတင်သွင်းခဲ့ပြီးနောက် ယင်းသို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ဒီဥပဒေဟာ ၇ဝ ရာခိုင်နှုန်း သောတောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကာကွယ်ဖို့နဲ့ အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လက်တွေ့ ဘဝနဲ့ကိုက်ညီဖို့၊ ပကတိမြေပြင် အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီဖို့ ကျွန် တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်တွေ ထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့ ဒီဥပဒေကို ဂရုတစိုက်ပြုစုပေးစေလိုပါတယ်”ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်က ပြောသည်။ အဆိုပါဥပဒေကြမ်းကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည် မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးကတင်သွင်းခဲ့ပြီး ပြည်သူ့လွှတ် တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက လေ့လာတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာဖတ် ကြားခဲ့သည်။
ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာအရ အဆိုပါဥပဒေကို ရည်ရွယ်ချက်သုံးရပ်ဖြင့်ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ် ကြောင်းသိရပြီး ယင်းတို့မှာ (က) တောင်သူလယ်သမားများအခွင့် အရေးကာကွယ်ရေး၊ အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့နှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီ(သို့မဟုတ်)လုပ်ငန်းများကိုလိုအပ်ပါကပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်၊ (ခ)မူလဥပဒေတွင် တောင်သူ လယ်သမားများ၏သီးနှံစိုက်ပျိုး ခြင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်သာ ရေးဆွဲထားသကဲ့သို့ဖြစ်နေပါ၍ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူခြင်းလုပ်ငန်းများ အတွက်ပါ အားလုံးအကျုံးဝင်လာ စေရန်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တတိယအချက်အနေဖြင့် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ဦးဌေးငွေကတင်ပြရာ ”တောင်သူလယ်သမားများ ခေတ်နှင့်လျော်ညီသည့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နည်းစနစ်များကို ပိုမိုတွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုလာနိုင်စေရန်နှင့် စိုက်ပျိုး ရေး၊ မွေးမြူရေးစရိတ်ချေးငွေများ ကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာချေးယူခွင့်ရ စေရန်” လေ့လာတွေ့ရှိရသည်ဟု အစီရင်ခံခဲ့သည်။ တောင်သူလယ်သမားများ အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေးဥပဒေကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ တွင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ၊ ထို့နောက် ယနေ့ခေတ်ကာလ အခြေအနေအရဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကိုတင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သီတဂူ ဆရာတော်ကြီး သက်တော် (၈၁) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် သံဃာနှင့် သီလရှင်အပါး ၄ဝဝဝ ကို ဆွ
ရွှေဘုံသာမုနိ စေတီတော်မြတ်ကြီး၏ ရတနာ စိန်ဖူးတော်၊ ငှက်မြတ်နားတော်နှင့် ဘုံသုံးဆင့် ရွှေထီးေ
မက္ကဆီကို၏ ရာဇဝတ်မှု ထူပြောသော ဗီရာခရုဇ်ပြည်နယ်တွင် မြို့တော်ဝန် အသတ်ခံရ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ ငါးကြီးဆီ ဖြည့်စွက်စာ စားသုံးခြင်းက ဓာတ်မတည့်မှုကို လျှော့ချပေးနိုင်ဖွယ?
ပွင့်လင်းရာသီတွင် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် ဒုတိယ တစ်ကိုယ်တော် အခွေ ထွက်ရှိမည်
တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း တိုက်ခန်း မီးလောင် ၁၀ ဦးသေဆုံး
ကြားဖြတ် သန်းခေါင်စာရင်းကို လာမည့် နိုဝင်ဘာတွင် ၁၄ ရက်ကြာ နမူနာကောက်ယူမည်